Hubatamuu qabaa : OPDO Qeequuf, dhaabbata daldalaa dinnii – Kichuu
HomeAfaan OromooHubatamuu qabaa : OPDO Qeequuf, dhaabbata daldalaa dinnii
Hubatamuu qabaa : OPDO QEEQUUF , dhaabbata daldalaa dinnii dhaabbatee dhaa.
Kanaaf dhaabbata san keeysatti waan fedhan gurguruu, waan fedhanis gabaaf dhiheessuu kan danda’uu, hojjatoota dhaabbatichaa otuu hin taanee, abbootii qabeenyaa dhaabbatichaati.
Kanaaf dhaabbiticha san keeysaa waan isin barbaachise bitachuu yookin waan gabaaf dhihaate san achii keeysaa bitatanii bahuu malee, waan achi keeysa hin jirree, gaafii fayyadamtootaatiin dirqamaan dhiheesuu qabdan jechuun hojjatoottaa dhaabatichaa cinquufii gaafachuun , bu’aan dhufu yookin wantii fedhii keeysanio achi keeysaa argachuu gonkumaa kan hin danda’amneedha.
HOJJATOOTA DHAABBATICHAAS , jajuun walaalummaadha.
Sababbiin isaas HOJJATAAN sun yoo gabaa horatuuf afaaniin ,FIRA KOO, qomoo koo, jechuun yoo kan sobamtan taatee malee, dhaabiticha san keeysattii namni sun gatii irraa siif hirdhisuu, fii boruu waan ati barbaaddes gaafii fii fedhii keetiin siif dhiheeysuu gonkuma hin danda’u.
Kanaaf dirree duwwaatti ,soba afaan isaatiin yoo hojjataa dhaabbaticha keeysaa san jaalatanii leellistan taatee, abbaan dhaabbaticha namicha san , akka hattuutti ilaaluun dhaabbaticha san keeysaa battalumatti ari’uu, yookiin hannaan badii itti muree hidhaaf saaxiluu danda’aniidha…
Haala kanaan hojjatootnii dhaabbaticha sanii , gara hundaanuu warreen rakkoo keeysa jiran ta’uu isaanii irraa , yeroo kamiyuu abbootii qabeenyaa dhaabbatichaaf ajajamaa, fedha isaanii guutaa, garaa ofiifii jireenya ofii jiraachuuf jecha warreen hojii itti kennamee, yookin hojii QACARAMANII, irratti bobba’an kan hojjataa jiraanidha.
Kanaaf ABDII, QEEQA,fii JAJIINSA kamiyuu hojjatoota saniif hin barbaachisuu.
Kanaaf abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa akkuma maqaa isaatti, jechuunis DHAABBATA DIMOKIRAASI OROMOO, jeedhee jiruutti, dhaabbatichi sun dhaabbata waan ta’eef yoo hojiin isaa isaan baase ni hojjatuu yookin immoo CUFUUN dhaabbata biraa banatuu ni danda’uu jechuudha.
Sababbiin kan warra biyya bulchuu *ADDA BILISA BAASAA TIGRAY” ta’ee, *ADDA” kan jedhuu san kan hin diiggamne kan hin sochoonee dhaabbataa godhanii, kan oromoo kana immoo DHAABBATA godhanii tolchanii kaayaniifis kanumaaf ture.
OPDO Deeggaru Moo Dhiifnuu?
By: Beekan G Erena
OPDO deeggaruun rakkisaadha garuu itti fayyadamuun dandaama! OPDOn dhaaba wayyeeneen ittiin Oromoo saamuuf, seenaa qabsoo Oromoo gara-dabarsuu fi Oromoo cabsitee bulchuuf dhaaba maqaa Oromootiin tolfattedha. Kanaaf Dhimma Oromoo OPDOtti amanuun ykn dhiisuun gonkumaa hin dandayamu. Haatau malee adeemsa qabsoo keessatti meeshaa diinni ittiin nama waraanuuf tolfate (qawwee,eeboo,human namaa) sossobaniis tae boojianii harkaa fuudhanii diinatti garagalchanii ittiin ofirraa waraanuun baratamaadha.
Yeroo ammaa kanatti OPDO wayyaaneen tolfatte uummanni Oromoo dirqumaan harkaa boojiee jira. Qabsoo uummanni godhee cinaatti wayyaaneenis akka OPDO boojinuuf nugargaarteetti. Wayyaaneen ofiif lafaa fi qabeenya uummataa saamaa fi gurgurachaa,gurgursiifataa baatee gaafa muddamtu ammo OPDOtti garagaltee isinitu saame malee ana miti ittiin jette. OPDOtu isin ajjeese malee ana miti jette. Yakka ajjeechaashee dhokfachuuf waraanaa fi poolisii isheetti uffata Oromiyaa uffiftee saba ajjeesisaa turte OPDOtti haqatte. Miidiyaatti olbaatee hattoonni OPDO malee wayyaanee miti jette.
Uummanni achii ol, wayyaaneen achii gadi OPDO cafaqnaan OPDOn uummata caalaa wayyaaneetti waan aarteef uummatatti harka kennachuu barbaaddee jirti. Gaafa gooftolonni ishee kun dubbii itti furanii isheetti tolan ammo achi garagaluu dandeessi. Kanaaf meeshaa boojine kanatti of-eeggannoodhaan fayyadamuu waan qabnu natty fakkaata.Yoo dandayame akka diinni lammata deebisee hin galfanetti(hin boojinetti) of-eeggannoodhaan itti fayyadamuu, achi keessa namoonnis jiru waantaeef dadammaqsanii doofummaa fi joonjummaa wayyaaneen itti xaxxe kana irraa mulquun uummata isaaniitti darana akka maxxananii fi tajaajilan gochuu, kan didanii deebianii wayyaanee jala kaachuu barbaadan ammoo uummatatti achuma keessa akka wal-saaxilanii uummanni ofiraa toatu godhuun hanga dandayametti meeshaan boojiame kun deebiee wayyaaneef akka hingalle gochuudha. Garuu siyaasa,dinagdee, walumaa galatti dhimma Oromoo kamiyyuu akka dhaaba siyaasaatti OPDOtti dagachuun hin dandayamu!!!
Couple ‘detained in UAE for sex outside marriage’- BBC News